Shopify Nzvimbo yekutengesa yeIn-Store Kutengesa | Martech Zone
Shopify Nzvimbo yekutengesa yeIn-Store Kutengesa
NeChishanu, Gunyana 6, 2013 Svondo, Kubvumbi 26, 2020 Douglas Karr
Iwe unoziva iwe unoshanda mune yakashata indasitiri kana ako masisitimu ari kuve apera kushanda nekuda kweinternet indasitiri inoshanda kumashure. Iyi ndiyo poindi yekutengesa indasitiri. Pandakashanda mukutengesa tekinoroji makore mashoma kumashure, makambani ePOS aive makororo akawandisa. Taida kushanda navo uye kubatana navo, asi ivo vakationa setyisidziro uye vakativharira kunze. Zvizhinji zvacho zvaive zvichida nekuti tekinoroji yavo yaityisa. Vakanga vachiri kushanda mu199x User Interfaces, vaive nenyaya hombe dzekuchengetedza, uye bhizinesi ravo raive rakanaka chaizvo kungotengesa komputa dzemakomputa nema touch skrini katatu zvakapfuura zvavakakosha.
Ini ndakafara kuona uku kukura paEngadget, Shopify yakabatanidzwa yekutengesa chikuva inosanganisa pamhepo uye mu-chitoro kutengesa.
Shopify POS IPad application inokutendera kuti utengese zvigadzirwa zveShopify muzvinhu zvepanyama, zvekutengesa. Iyo POS inoita kuti kubatanidzwa kwese uye kuwiriranisa pakati pepamhepo uye pasiri pamhepo kusakosha nekuti zvese zvigadzirwa, vatengi uye mirairo zvese zviri munzvimbo imwechete - online.
Vatengesi havachafanirwe kuteedzera akawanda maumbirwo, zvigadzirwa zvigadzirwa, uye maitiro ekubhadhara. Shopify inosanganisa ese maficha ebhizinesi rako rekutengesa mune imwechete nyore kushandisa chikuva chinouya nekadhi swiper yekubvuma VISA, MasterCard uye American Express makadhi echikwereti. Nemuverengi wavo wekadhi, iwe unowanawo makuru mareti ekubhadhara - 2.1% + 30 ¢ pane ese makadhi echikwereti. Iko hakuna mari dzakavanzika kana mutengo wakaomarara.
Unogona kukwidziridza poindi yako ye sale system ine Hardware yakagadzirirwa Shopify POS, inosanganisira kuverenga kadhi rechikwereti, dhirowa remari, iPad kumira uye risiti purinda. Raira pamhepo uye kutumira kuri mahara.
Ini pachangu, ndinoda kuona izvi. Ini handikwanise kumirira kudzamara mamwe emakambani ePOS apera bhizinesi rekubata vatengi vavo uye vavanoshanda navo zvakanyanya.
Tags: poindi yekutengesaPosshopify
Shandura: Yakabatanidzwa Cloud CRM yeSMB